IHE OYIYI NA-ADỊGHỊ EFU SITE NA WINDOWS 10 DESKTỌỌPỤ: AKPATA, ỤZỌ ISI MERIE NSOGBU AHỤ - WINDOWS - 2019
Onye ọrụ Windows 10 nwere ike ịnweta ọnọdụ ebe, na-enweghị ihe ọ bụla o mere, akara ngosi ga-amalite ka ewepụ ya na desktọọpụ. Iji kpochapụ nsogbu a, ị ga-achọ ịma ihe kpatara ya nwere ike ịpụta.
Ihe mere ichoro ihe icons
Esi weghachi icodo na desktọọpụ gị
Nje Virus iwepụ
Mee ka ngosi nke akara ngosi rụọ ọrụ
Video: esi tinye akara ngosi "My Kọmputa" na desktọọpụ na Windows 10
Mepụta ihe ọhụrụ
Deactivating Tablet Mode
Video: otu esi gbanyụọ "Ụdị tabodu" na Windows 10
Nyocha Nyocha abụọ
Na-agba ọsọ nyocha
Ntinye akwụkwọ na akara ngosi
Video: otu esi wepu melite na Windows 10
Ntọala edebanye aha
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe enyere gị aka
Video: esi eweghachi usoro na Windows 10
Ihe ichoro efu site na "Taskbar"
Inyocha ntọala nke "Taskbar"
Na-agbakwụnye akara ngosi na ngalaba ọrụ
Isi ihe kpatara mgbaghara nke akara ngosi gụnyere ọrịa usoro ma ọ bụ ọrịa nje. Na nke mbụ, ịkwesịrị ịlele usoro ntọala ụfọdụ, na nke abụọ - tufuo nje ahụ, wee laghachi na akara ngosi na aka gị.
Ihe kpatara nsogbu ahụ nwere ike ịbụ:
ezighi ezi nhazi nke mmelite;
arụ ọrụ "Ụdị kaadị";
ezughị oke nke nyocha nke abụọ;
usoro kpochapụrụ Explorer.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ mere mgbe ị wụnye mmelite, o yikarịrị ka ha ebudatara ma ọ bụ mee ka ha nweta njehie nke kpatara mwepụ nke akara ngosi. Lelee usoro ntọala ma tinye akara ngosi.
"Mbadamba ụrọ" gbanwere ụfọdụ ihe onwunwe nke usoro ahụ, nke nwere ike iduga na akara ngosi efu. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ezu iji gbanyụọ ya iji weghachite akara ngosi niile, mgbe ụfọdụ mgbe ọ kwụsịrị, ị ga-eji aka tinye akara ngosi dị mkpa.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe kpatara akara ngosi ahụ kwụsịrị na ikpe gị, wee soro ntuziaka dị n'okpuru otu otu.
Tupu ịmalite ịlele ma gbanwee ntọala, ịkwesiri ijide n'aka na kọmputa enweghị nje. Ụfọdụ malware nwere ike ihichapụ ma gbochie akara ngosi desktọọpụ. Gbaa antivirus arụnyere na kọmpụta gị ma gosipụta iṅomi zuru ezu. Wepụ nje virus.
Lelee kọmputa gị maka nje virus ma wepụ ndị ahụ.
Lelee ma usoro a na-enye ohere igosi akara ngosi na desktọọpụ:
Right pịa na ebe efu na desktọọpụ.
Gbasaa taabụ "View".
Jide n'aka na arụ ọrụ "Ngosi ngosi ngosi Desktọpụ". Ọ bụrụ na akọrọ adịghị mkpa, tinye ya, akara ngosi kwesịrị igosi. Ọ bụrụ na amaalarị akara akara ahụ, wee wepu ya, wee tinye ya ọzọ, ikekwe ị ga-enyere ya aka.
Tinye ọrụ "Gosi akara ngosi desktọọpụ" site na ịpị aka na desktọọpụ ma gbasaa taabụ "View"
Ị nwere ike ịnwa ịmepụta ihe ọhụrụ ọ bụla. N'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe nke ahụ gasịrị, akara niile zoro ezo na-apụta ozugbo.
Gbasaa Mepụta taabụ.
Họrọ ihe ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, nchekwa. Ọ bụrụ na nchekwa ahụ apụtawo, ma akara ngosi ndị ọzọ abụghị, mgbe ahụ usoro a anaghị arụ ọrụ, gaa na-esote.
Gbalịa ịmepụta ihe ọ bụla na desktọọpụ gị.
Ịrụ ọrụ Mbadamba ụrọ na-arụ ọrụ pụkwara iduga akara ngosi. Iji gbanyụọ ya, mee ihe ndị a:
Gbasawanye usoro kọmputa.
Mepee ntọala kọmputa
Họrọ ngalaba "System".
Mepee akụkụ "System"
Ghọta ihe mmịfe ahụ na taabụ "Mbadamba ụrọ" wee rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na agbanyụrịrịrịrị ọnọdụ ahụ, wee gbanye ya, wee tụgharịa ya ọzọ. Ikekwe nyochaghachi ga enyere aka.
Gbanyụọ usoro mbadamba site na ịmegharị ihe mmịfe ahụ
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ pụtara mgbe ị na-ejikọ ma ọ bụ na-ekpuchi nyocha nke abụọ, mgbe ahụ, ịchọrọ ịgbanwe ntọala ihuenyo:
Pịa na ebe efu na desktọọpụ na bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe "Ngosipụta Ntọala".
Mepee ihe "Ntọala ihuenyo"
Gbalịa gbanyụọ nyocha nke abụọ ahụ, gbanye ya, gbanwee ntọala ngosi na mkpebi. Gbanwee ihe niile nwere ike ime, ma weghachite ha na ụkpụrụ mbụ ha. Ikekwe nke a ga - enyere aka idozi nsogbu ahụ.
Gbanwee ogidi nke ncha ihu abụọ ahụ, wee weghachite ha na ụkpụrụ mbụ ha.
Explorer.exe bụ ọrụ maka ọrụ "Explorer", nke ọ na-adabere ma akara ngosi desktọọpụ ga-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. Usoro nwere ike mechie n'ihi ụfọdụ njehie na usoro, mana enwere ike ịmalite aka:
Mepee "Task Manager".
Mepee Task Manager
Gbasawanye taabụ "Njikwa" wee gaa n'ihu ịmepụta ọrụ ọhụrụ.
Gbaa oru ohuru site na taabụ "Njikwa"
Debanye aha "onye nyocha" ma gosi ihe ahụ. Emere, usoro ahụ ga-amalite, akara ngosi kwesịrị ịlaghachi.
Gbaa usoro Explorer iji weghachite akara ngosi na desktọọpụ.
Chọta usoro na ndepụta ọrụ zuru ezu, ọ bụrụ na ọ malitere, ma kwụsị ya, wee soro ihe atọ ahụ dị n'elu iji malitegharịa ya.
Malitegharia "Explorer" ma ọ bụrụ na eburu ya ụzọ.
Ọ bụrụ na akara ngosi apụla ma ọ pụtaghị mgbe ị gbasịrị ntụziaka ndị ahụ dị n'elu, mgbe ahụ ịkwesịrị ịgbakwunye ha na aka. Iji mee nke a, megharịa ụzọ mkpirisi na desktọọpụ ma ọ bụ jiri ọrụ "Mepụta", nke a na-akpọ site na ịpị aka na ebe efu na desktọọpụ.
Tinye akara ngosi na desktọọpụ gị site na taabụ "Mepụta"
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na desktọọpụ gosipụtara mgbe ị wụnye mmelite ntanetị, ha ga-ewepu site na ịgbaso usoro ndị a:
Họrọ ngalaba "Mmemme na Atụmatụ" na Ogwe njikwa.
Gaa na ndepụta mmelite site na ịpị "Lee nwelite arụnyere."
Pịa bọtịnụ "Lee mmelite arụnyere"
Họrọ mmelite nke i chere merụọ kọmputa ahụ. Pịa na bọtịnụ "Hichapụ" ma kwenye ihe. Mgbe usoro ahụ laghachiri, mgbanwe ga-arụ ọrụ.
Họrọ ma wepu mmelite nwere ike imerụ kọmputa gị.
O kwere omume na agbanweela ntọala ma ọ bụ mebiri emebi. Iji lelee na weghachite ha, na-agbaso usoro ndị a:
Jide Win + R, denye aha regedit na window nke meghere.
Gbaa iwu regedit
Soro ụzọ HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon. Lelee nhọrọ ndị a:
Shell - kwesịrị ịbụ uru nke explorer.exe;
Onye ọrụ - kwesịrị ịbụ C: Windows system32 userinit.exe.
Mepee ngalaba HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon
Gaa na ụzọ: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Image File Execution Options. Ọ bụrụ na ịchọta onye nyocha explorer.exe ma ọ bụ iexplorer.exe ebe a, hichapụ ya.
Malitegharịa ekwentị gị maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị dị n'elu enyerela gị aka idozi nsogbu ahụ, ọ dị naanị otu ụzọ - iji weghachite usoro ma ọ bụ weghachi ya. Nhọrọ nke abụọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na e nweela usoro ndabere nke usoro ahụ. Mgbe ụfọdụ, a na-ekepụta ya na-akpaghị aka, ya mere enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ị mepụtaghị onwe gị.
Na ndabara, usoro ihe mgbake na-emepụta ya na-akpaghị aka, ya mere, ị ga-enwe ohere iji tụgharịa Windows na steeti mgbe ihe niile na-arụ ọrụ siri ike:
Chọta na nchọta search "Malite" ngalaba "Iweghachi".
Mepee ngalaba "Iweghachite"
Họrọ "Malite System Weghachite."
Mepee "Malite System Restore" ngalaba.
Họrọ otu n'ime akwụkwọ ndị dịnụ ma mezue usoro ahụ. Mgbe usoro laghachiri, nsogbu na desktọọpụ ga-apụ n'anya.
Họrọ ebe weghachite ma mechaa mgbake.
Ihe ngosi ichoro Taskbar di na ala aka nri nke ihuenyo. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ akara ngosi nke batrị, netwọk, ụda, antivirus, Bluetooth na ọrụ ndị ọzọ nke onye ọrụ na-ejikarị eme ihe. Ọ bụrụ na ụfọdụ akara ngosi apụla na Taskbar, ị ga-ebu ụzọ nyochaa ntọala ya ma tinye akara ngosi ahụ na efu.
Pịa na "Taskbar" (ogwe ojii na ala nke ihuenyo) na bọtịnụ òké aka nri ma họrọ "Nhọrọ nhọrọ".
Mepee nhọrọ "Taskbar"
Jide n'aka na agbadoro atụmatụ niile ịchọrọ. Isi ihe bụ na Taskbar n'onwe ya nọ n'ọrụ.
Lelee ntọala nke "Taskbar" ma mee ka ọrụ niile ịchọrọ.
Iji tinye akara ngosi ọ bụla na "Taskbar", ịchọrọ ịchọta faịlụ ahụ na ụdị .exe ma ọ bụ ụzọ mkpirisi nke na-ekpughere usoro achọrọ ma dozie ya. Ihe ngosi ahụ ga-apụta na oghere aka ekpe nke ihuenyo.
Debe ihe omume ahụ na "Taskbar" ịgbakwunye akara ngosi ya na akuku aka ekpe nke ihuenyo
Ọ bụrụ na akara ngosi efunahụ na desktọọpụ, ịkwesịrị iwepu nje, lelee ntọala na ntọala ihuenyo, malitegharịa usoro Explorer ma ọ bụ weghachite usoro. Ọ bụrụ na akara ngosi apụla na "Taskbar" ahụ, ịkwesịrị ịlele ntọala kwesịrị ekwesị ma jiri aka tinye akara ngosi efu.